Ciidamada Kenya Oo Gacanta Kudhigay Qalabka Qarxa Iyo 2 Nin Oo Falkaasi Gacanta Kula Jiray. - Cakaara News
Ciidamada Kenya Oo Gacanta Kudhigay Qalabka Qarxa Iyo 2 Nin Oo Falkaasi Gacanta Kula Jiray.
Jigjiga(CN) Arbaco.Dec.2014, tan iyo intii uu soo shaac baxay heshiiska UBBO iyo Alshabaab, ee ay qaramada midoobay soo saareen warbixinta sheegaysa in ay UBBO heshiis qarsooni ah lagashay Alshabaab ee uu caalamku si dhab ah u fahmay argagixisinimada qaar kamida masuuliyiin kusheegta UBBO, islamarkaana uu booliska aduunka ee awooda u leh in uu danbiile kasta ka qaban karo wadanka kasta uu magaalada Addis Ababa ka furtay xafiis caalami ah, iyadoo aan ogsoonahay in wadamada Yurub, Afrika iyo Carabta ay Itoobiya kasoo qabatay danbiilayaal uu kamid yahay hogaamiyihii ururka Qinijid.
Waxaa masuuliyiin isku sheegta UBBO lasoo darsay walbahaar iyo walaac aad u wayn oo ay keentay labada arimood ee halka mar dhacay sida go'aanka UN iyo booliska aduunka ee dhawaantan xafiiska kafurtay magaalada Addis Ababa. Taasoo ay iskacadahay in maalin dhaw ay Itoobiya qoorta soo qaban doonto saraakiisha UBBO ee xasuuqa DDSI kagaysatay loona keeni doono saaxiibadooda.
Dhanka kale baadhitaan ay booliska Kenya sameeyeen waxay gacanta kudhigeen guri lagu diyaariyo waxyaabaha qarxa kaasoo siwada jir ah ugu kiraysnaa UBBO iyo Alshabaab. Waxaana kamid ahaa dadkii laqabtay Cabdulaahi iyo Jaamac niman lakala dhaho oo falka gacanta kula jiray. Waxayna booliska Kenya abaal marin dheeri ah siiyeen cidii xogtaasi keentay.
Dhinaca kale waxaa UBBO fariin u diray askari lagu magacaabo UBBO qararamsade waxaana hadalkiisii kamid ahaa sidan:
marka hore waxaa mahad iska leh Eebe kadibna shacabka DDSI ee ah midka aan dhexda u xidhanahay ee aan naftayda iyo dhiigaygaba u hurayo habeen iyo maalinba. Waxaa ii hirgalay halgankii aan u galay sidii aan shacabkayga u gaadhsiin lahaa nabadgalyo iyo horumar. Waxan DDSI si xarago leh uga tirtiray UBBO waxaana maanta DDSI kabilaabmay horumarka xawliga ee kasocda.
Marka waxaan masuuliyiin kusheegta UBBO ee Yurub ku raaxaysanaysa u sheegayaa horta fulaynimo iyo naf jacayl waa waxa aad Yurub iyo Austareeliya lajoogtaan cabsi darteed. Waxaan idiin sheegayaa laba arimood kala daaya fulaynimo iyo damac maalin riyood ah oo aad ku raadiso in DDSI aad kahadasho.
Adeer nabada DDSI waxaa loo soo huray naf iyo dhiig waxaana u soo halgamay shacabka DDSI iyo caruurtiisii kaana sifeeyay. Ubbooy halgan-fadhi kudirirka salka ku haya qutul daruuriga iyo damac maalin ku riyoodka meelna laguma gaadho mana suurta galo. Halgan-fadhi kudirirka aad ubbooy kaga jirto Yurub, Australiya iyo Koonfur Afrika natiijo makeenayo mana jirto wax aad kaba hadasho oo gacanta kuugu jira.
Ubbooy waxaa kuu banaan oo kaliya inaad dastuurka Itoobiya shuruud la'aan aad qaadataan oo aad sida kiniinka u liqdaan. Ubbo waa in adigoo goojinaya aad timaado tastuurka Itoobiyana ku wardiyaya islamarkaana aad cadayso khaladka aad kujirtay masuulna aad katahay wixii dhacay ee aad shuftada ku ahayd dawlada Itoobiyana ay saxsanayd. Si shaqsi ahna aad heshiis u qaadataan, taasaa ah wadada kaliya ee kuu banaan Ubbooy.
Waxaadna ogaataa in dilkii, dhicii iyo boobkii hantida shacabkana la isku haysto, mana suurtoobi doonto in la iska ilaawo ama ay kuwii kadanbeeyay falalkaasi ay iskaga raaxaystaan qaar kamida wadamada qurbaha.